CBD Mafuta eAne Acne | Yakanakisa CBD Solutions muna 2020
Facebook peji rinovhura muhwindo idzvaPeji re Twitter rinovhura muhwindo idzvaLinkedin peji rinovhura muhwindo idzvaPeji ye Instagram inovhura muhwindo idzvaYouTube peji rinovhura muhwindo idzva
CBD Online Chitoro
Shop Delta 8 THC Zvigadzirwa
Is Delta 8 THC Zviri Pamutemo Mune Nyika Yangu?
Delta 8 THC & CBD Yakabatana Link Chirongwa
Maitiro Ekuvhura A Dispensary Kune Asingasvike $ 50 Madhora
Tenga CBD Zvigadzirwa
CBD Macapsule & Girazi Nyoro
CBD Mishonga yepamusoro
CBD Ganda Kuchengeta
CBD Mafuta & Tinctures
CBD Vape Peni
Ndeapi mabhenefiti eCDD
Chii chinonzi CBD?
Mhinduro dzechiremba Kubva Kutenderera Iyo Webhu Nezve Delta 8 THC & CBD
Ndeupi musiyano uripo pakati peC CBD Mafuta uye Yakazara Spectrum Oiri
CBD & Chirwere cheshuga
CBD & Hutano
CBD Yekurwadziwa Kurwadziwa
Red Emperor CBD & Delta 8 THC Inoshanda Sei?
Yakabatana Yakagamuchirwa Peji
CBD Mafuta eAne Acne
Chii chinokonzera acne?
Mashandisiro Ekushandisa CBD Oiri yeAne
Chaizvoizvo CBD Mafuta Anorapa Acne?
Acne ndeimwe yemamiriro ezvinhu eganda anokanganisa hupenyu hwevechidiki vazhinji, asi kunyangwe isu vedu vasiri vechidiki zvakare vanoshamiswa nekupunzika pano neapo.
Matambudziko eganda senge acne anoita kuti tishandire kumakemikari zvinhu kuyedza kubvisa zits. Asi zvinhu izvi kazhinji zvinokonzeresa kutsamwa paganda. Nekudaro, pane chinhu chechisikigo chinogona kuve mhinduro kudambudziko reganda iri.
Cannabidiol kana CBD inozivikanwa seimwe yemakemikari anodarika zana anonzi cannabinoids ayo arimo muCannabis Sativa zvirimwa. Cannabidiol inonyatso kuzivikanwa neayo anti-kusagadzikana, kupokana-kuzvidya mwoyo, kupesana nekuzvimba, uye kurwadziwa-kwekusunungura zvivakwa.
Kusiyana neinozivikanwa tetrahydrocannabinol kana THC, inova iyo inoshanda cannabinoid mumbanje, cannabidiol haina psychoactive mhedzisiro, ndiko kuti, haife yakakuita wakakwira, kunyangwe ukatora zvakadii.
Asi, chinhu chinoshamisa ichi chinofanirwa kuve neakasiyana mabhenefiti ehutano, nekuda kwekubatana kwayo nemutumbi wemuviri wanga usingazivikanwe makore makumi matatu apfuura.
Iyo endocannabinoid system (ECS) chirongwa chekuratidzira chiripo mune zvipuka, izvo zvinodzora zvakasiyana siyana zvemuviri mashandiro, kusanganisira kuda kudya, ndangariro, kurwadziwa, kushushikana, uye zvimwe zvakawanda. Uye zvese zvinopa homeostasis kana hutano hutano. Muviri wedu unogadzira endocannabinoids, ayo ari maurotransmitter anotumira mameseji kune anogamuchira mumuviri wedu kuti aite chiito.
Mune imwe nzira inoshamisa, iyo phytocannabinoids inowanikwa mune cannabis Sativa chirimwa chinotevedzera zvinoitwa neiyo endocannabinoids. Cannabinoids senge cannabidiol kana chena chitaridzi CBD akave akabatanidzwa kune akasiyana ehutano mabhenefiti uye inogona kunge iri mhinduro kune vanhu vanotambura nezvinetso zveganda senge acne.
Mumuviri wedu unoviga chinhu chine mafuta chinonzi sebum kuburikidza neanosimba gland ari pasi peganda. Chinangwa che sebum ndechekuchengetedza ganda rakazorwa uye richidzivirira kubva pakuoma. Iyi sebum inofamba ichikwidza bvudzi follicles uye inobuda nepakati pe pores.
Asi pamwe nesebum, bvudzi follicles rinoteurawo akafa maseru eganda kunze kwemuviri. Kana paine akawanda sebum uye maseru eganda, pores anogona kuvharwa. Izvo zvinovaka akawandisa mabhakitiriya, ayo anokonzeresa kuti nzvimbo dzinopisa dzatinoziva seacne.
Pakati pezvikonzero zvinoita kuti izvi zviitike, tinogona kuwana:
Pores Yakavharwa neakafa Makanda maseru: Akawandisa akafa maseru eganda akaburitswa kamwe chete anogona kukonzera kuvaka-maseru uye sebum kunamatira pamwe uye kuvhara mapares.
Kuwedzera Sebum: Sebum yakawandisa inogona kuvhara pores, kuita kuti ganda romusoro rive nemafuta, uye kuburitsa mafuta akawandisa paganda, izvo zvinotungamira kune zits uye mavara.
Kuwedzera Bhakitiriya: Kana ganda rovharika rikaitika, mabhakitiriya aripo paganda anokura, achibatanidza neiyo sebum uye inotungamira mukuzvimba.
Akawandisa Mahormone: Iyo testosterone inowedzera panguva yekuyaruka ichikonzera izvo zvisimba sebaceous kuwedzera uye kuburitsa yakawanda sebum.
CBD Chiso & Acne Kuchenesa
Kune nzira dzakawanda dzekuwana CBD mafuta mumuviri wako uye kuita kuti ishande. saka inogona kusvika kubasa. Dzese nzira dzinoita kuti mukomboni uwirirane nema receptors mumuviri wako kuti ubudise mhedzisiro, asi mune yakatarwa acne, misoro ndiyo sarudzo inosarudzwa.
Kune akasiyana siyana makirimu, mafuta, serum, uye mabharamu ane masimba akasiyana e cannabidiol. CBD oiri inodakadza zvakanyanya uye inogona kupinda nyore nyore paganda kune iro rinotapira gland. CBD misoro, kunyanya hemp-yakatorwa ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo kune vanhu vanorwara neacne sezvo hemp mbeu yemafuta zvakare iine akakosha amino acids.
Capsules inzira iri nyore uye inoshanda yekutora CBD mafuta. Vanouya musimba rakasiyana siyana uye mhedzisiro yavo inosvika kusvika maawa masere.
Kuputira maruva kana e-mvura inopa mhedzisiro nekuti mhute inoenda kumapapu uye kubva ipapo ichienda muropa kuburikidza nekumwa kwemapapu. Vaporizers vanopisa chigadzirwa pane kuchipisa, saka hapana zvinhu zvine chepfu zvinopinda mumuviri wako.
Madonhwe anotorwa zvishoma nezvishoma. Ivo vanowanikwa musimba rakasiyana siyana, hemp-chete ye terpene-yakamisikidzwa uye vanouya mune akasiyana siyana.
Kune vanhu vanogona kusada / kushivira kuravira kweiyo CBD oiri tincture, CBD inowanikwawo muchimiro chezvikafu, zvinwiwa, uye zvinwiwa. CBD edibles inokupa iwe muyero unotora kusvika maawa masere. Iwe unogona kunyange kumba kugadzira edibles uchishandisa iyo tinctures.
Chiito cheCDD paECS yeganda chinoshamisa semuti waunobva. Pakati pe "anti-acne zviito" zveCDD, tinogona kutaura:
CBD inonzi inhibit the lipogenic action of endocannabinoids anandamide and 2AG, which are produced in the sebaceous glands and act on CB2 receptors, being responsible for the excess sebum production. CBD inogadzirisa kugadzirwa kwe sebum.
CBD oiri ine anoshamisa antibacterial mhedzisiro, uye inogona kubvisa hutachiona hwakakomberedza saiti yehutachiona.
Mafuta eCDD anodzivirira kuzvimba anodzivirira "pro-acne" vamiririri kubva mukuwedzera pro-kuzvimba cytokine mazinga.
CBD Inobatsira Here Ne Acne Scars?
Musoro we CBD mafuta akaiswa nehemp mafuta ane hutano hunovandudza kutaridzika uye chimiro cheganda kana chikashandiswa kaviri pazuva kwemwedzi mitatu.
CBD Inoshanda Pamuviri Acne?
CBD mafuta anonzi anoshanda nemuviri acne. Kupaza kunogona kuitika pamutsipa, mapfudzi, musana, uye chipfuva nekuti nzvimbo idzi dzine gland dzakanyanyisa kupfuura muviri wese.
CBD inogona kudzikisira sebum excretion iyo inogadzira iyo clog iyo inoguma mune zits. Iyo inoderedzawo huwandu hwehutachiona hunoungana panzvimbo yehutachiona uye hunoderedza iko kunotevera kuzvimba.
Inogona here CBD Kubatsira Nemamwe Matambudziko eGanda?
Ganda, inova nhengo hombe mumuviri, rine ECS mamorekuru ekuratidzira system mukati mayo. CBD yakaratidza kushamwaridzana nayo. Iyo anti-bhakitiriya, antioxidant, anti-microbial, uye anti-kuzvimba mhedzisiro yeCDD inobatsira kuenzanisa hutano uye inogona kubatsira kudzikisa / kubvisa mamwe mamiriro eganda senge psoriasis, dermatitis, uye ganda rakaoma uye rinonhuwa.
Nepo tsvakiridzo ichiri kuenderera, CBD yakaratidzirwa kuve nemukana wakakura wekurapa mamiriro akati wandei eganda, kusanganisira acne, nekudzora kugadzirwa kwe sebum nekuzvimba, uye kubvisa hutachiona.
Hapana imwe anti-acne mumiririri inofananidzwa neCDD maererano nekushanda. Kwete izvozvo chete asi iyi cannabinoid yakaratidza kushivirira kwakanyanya muvanhu uye haigumbure ganda.
Acne uye mamwe mamiriro eganda haafanire kukanganisa hupenyu hwedu nenzira isina kunaka, asi pavanotanga kukanganisa hutano hwedu hwepfungwa, inguva yekutsvaga mhinduro yechisikigo seCBD.
pashurePrevious mumhanyi;CBD, CORONA VIRUS NEMUNITINextNext mumhanyi;6 Unofanirwa-Uine CBD Ganda Kuchengeta Zvigadzirwa kana iwe uchigara muNew York
Tsvaga Wedu Ekupedzisira Blogs
Yedu Yemablogi Mablog
Delta 8 THC & Kuonda
Mumiriri Freak Nasty's PAMWEDZI Intelligence Report 8-30-2021
Mumiriri Freak Yakashata MWEZVIMWARI Nenjere Chirevo 7-25-2021
Mumiriri Freak Nasty Weekly Intelligence Report 6-27-2021
Texas Inobvumidza Delta 8 THC Zvigadzirwa
Nyowani: Kudzidzira Kuzvitsvaga Makuru Mahara eBDD Anobatsira Makonzo Kuderedza Meth Intake
Chitoro cheRed Emperor CBD pamhepo chakavakirwa pazviuru zvemakore ekurapa kwakabudirira nemiti yehemp yakatanga kunyorwa munhoroondo ichishandiswa muChina naMambo Shing Nung akatumidzwa zita rekuti Red Emperor. Shambadziro yeCannabis naIsenselogic.com iyo nhamba yekutanga SEO yakasimba yekuvaraidza mbanje, mbanje yekurapa, uye mawebhusaiti eCDD.
Tsvaga isu pa:
Facebook peji rinovhura muhwindo idzvaPeji re Twitter rinovhura muhwindo idzvaYouTube peji rinovhura muhwindo idzvaLinkedin peji rinovhura muhwindo idzvaPeji ye Instagram inovhura muhwindo idzva
Copyright © 2020 RedEmperorCBD.com | Powered by IsenseLogic.com